किन खस्छ पाठेघर ? सबै महिलाहरुले जान्नै पर्ने कुरा – ramechhapkhabar.com
किन खस्छ पाठेघर ? सबै महिलाहरुले जान्नै पर्ने कुरा
नेपाली महिलाहरुको प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरु मध्ये पाठेघर झर्ने (खस्ने) ‘जसलाई आङ खस्ने पनि भनिन्छ’ एक मुख्य समस्या हो । महिलाको पाठेघर झर्नु (खस्नु) को मुख्य कारण गर्भाशयलाई बाँधेर राख्ने नशाहरु कमजोर भएर त्यससंग जोडिएका अंगहरु विस्तारै तल खस्नाले हुन्छ । पाठेघर झर्नुका मुख्य कारणहरु निम्न छन्-
कम उमेरमा विवाह गर्नाले कम उमेरमा बच्चा जन्माउनाले र गर्भान्तर नगरी बर्षेनी बच्चा जन्माउनाले बच्चा जन्मिसकेपछि चाँडै साल झरेन भनेर बल प्रयोग गरी साल निकाल्नाले सुत्केरी अवस्थामा टुक्रुक्क बसेर लुगा धुने वा गह्रौँ कामहरु गर्नाले गर्भवती वा सुत्केरी अवस्थामा राम्रो स्याहार नपाउनाले सुत्केरी अवस्थामा धेरै हिड्ने, गह्रौँ भारी उचाल्ने बोक्ने गर्नाले चुरोट खाएर बारम्बार खोकी रहनाले पनि पाठेघर खस्नुका कारण हो ।
युवतीहरु सुन्दर रहन विभिन्न क्रिम पाउडरको प्रयोग गर्छन् । केही यस्ता घरेलु उपायहरु पनि छन् जसका कारण सुन्दर रहन सकिन्छ । हरेक कुरा मार्केटमा पाइने समाग्रीभन्दा पनि केही घरेलु उपाय बढी फाइदाजनक हुने गर्छन् । क्रिम पाउण्डरको प्रयोग बिना पनि युवतीहरु सुन्दर रहन सक्छन् । केही यस्ता फुड्सहरुको प्रयोगबाट पनि सुन्दरता सन्तुलन गर्न मिल्छ ।